AutoDesk - Bogga 2 - Geofumadas
Warbixin kooban ku Media Day Xog la waxyoonay
Haatan waxaan haysannaa maalintii ugu horreysay, ka hor Dhiirrigelinta, loogu talagalay saxaafadda; oo leh isbeddellada ugu waaweyn ee Bentley Systems waxay rajeyneysaa inay u gudubto heerka warbaahinta. Waqtigaan la joogo, dareenkeygii ugu horreeyay. Pointools waxay umuuqataa inay tahay helitaanka ugu fiican Bentley, sidaan qabo. Shirkad muhiim ah oo Agaasimihii hore ee ...
liisanka waxbarasho ee AutoCAD
Barashada aaladda kombiyuutarka way fududaanaysaa maalin kasta, casharrada AutoCAD oo dhammaystiran oo khadka tooska ah ah, baloogyo, goleyaal iyo bulshooyinka isticmaala ayaa ku dhow in lagu barto is-barasho. Si loo barto AutoCAD looma baahna in la helo rukhsad sharci darro ah, ujeeddooyinkan awgeed waxaa jira noocyo waxbarasho oo ka madax bannaan AutoDesk, gebi ahaanba ...
Haddii aadan waligaa maqlin FastCAD ... waa inaad. Waan ogahay, waad ogaan kartaa markii ugu horaysay inuu barnaamijkani jiro, laakiin waxaan rabaa inaan daqiiqad ka qaato habeenkan jalaatada leh buskudka Oreo si aan u tuso qalab aan haysanno wax aan ka barano xitaa haddii uu ku jiro sadarka ugu dambeeya. Waa maxay sababta FastCAD muhiim u tahay Waa hagaag ...
Bishii Abriil 7, Bentley waxay qabatay shir khadka tooska ah ah, halkaas oo ay ku muujisay badeecooyinka aagga geospatial ee ka kooban waxa loogu yeero Khariidadda Bentley (Xulo Taxanaha 2). Munaasabadan waxaa hogaaminayay Richard Zambuni, Agaasimaha Global ee Suuq geynta aagga geospatial iyo Robert Mankowski, Madaxweyne kuxigeenka Horumarinta. Waa lasoo bandhigay…
Geospatial - GIS, tabo cusub, Microstation-Bentley
Ates kale CAD for Linux iyo Mac a
Ma jirin xalal naqshadeyn badan oo la caawiyey oo ka baxsan Windows. ArchiCAD waxoogaa ayey keli ku ahayd Mac-da, hadda AutoCAD waxay go'aansatay inay gasho suuqan, Ares-na waa mid kale oo xiiso leh. Magaceedu uma dhawaaqo sida AutoCAD, oo leh hooska soo dejiyaha P2P ka dhigaya iyo ...
Kooxda wanaagsan ee Ipad ah
Safarradaydii ugu dambeysay waxay igu qasbeen inaan aqbalo iPad-ka iyadoo lagu beddelayo aragti su'aal laga qabo, inta udhaxeysa geesinimada in lacag la aanta aan ku baxo duulimaad 11-saacadood ah, cadhada safarka dhulka ee saacadaha 27 Aeromexico darteed - taas oo ah a masiibo- oo ku dhufata soo jeedinta ...
Shaki kuma jiro in adduunka Mac uu ka fiican yahay, laakiin shakiga aan ka qabno guuritaanku had iyo jeer wuxuu ahaa: Oo sideen ku sameeyaa AutoCAD? Kumaa rumeysan lahaa, kadib 1994 13 AutoCAD R42c18b ayaa ahaa kii ugu dambeeyay ee aan aragno kala badh oo ku ordaya Powermacintosh. XNUMX sano kadib, waxaa soo laabtay AutoCAD oo loogu talagalay Mac isla sanadkaas ayay sidoo kale ka go'day ...
Sannadkii hore waxaan ka hadlayey wixii aan u maleynayay inaan ka ogaan karo Bentley iyada oo la adeegsanayo shuruudaha I-model. Sannadkan, sigaar cabiddu way caddahay, iyo maxay tahay, ka dib natiijooyinka isdhexgalka ee soo iibsiga dhowaan sida eB, Exor iyo ka faa'iideysiga weyn ee xml. Sanado badan…
Indho at gvSIG 1.10
Dhowr maalmood ka dib markii aan daalacanayay gvSIG 1.9, dulqaadkii aan ka qabay cilladaha noocaas ah iyo dhibaatooyin kale, maanta waxaan ku soo laabtay arrinta gvSIG. Anigoon taaban software-kan mudo dheer aniga ayaa waxtar ii leh, maxaa yeelay furitaanka nuucaan cusub iyo isbarbardhiga sawirkii aan ka soo qaatay munaasabadaas waa ...
AutoDesk Bentley Systems ESRI GvSIG OS My aragti ugu horeysay QGIS
Geospatial - GIS, GvSIG, aragti ugu horeysay